Samsung Galaxy S6 ihu + vs iPhone 6s Plus, ntụnyere | Androidsis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Noticias, Nyocha, Samsung
Apple ewepụtala ọhụụ ọhụụ nke ọhụụ: iPhone 6s na iPhone 6s Plus, ngwaọrụ abụọ a kpọrọ ọgbọ ọhụụ nke ụlọ ọrụ si Cupertino. Ajụjụ nke ọtụtụ puku ndị ọrụ na-ajụ bụ: olee ekwentị m họọrọ, iPhone 6s Plus ma ọ bụ Samsung Galaxy S6 ihu +?
Iji dozie ajụjụ a, anyị ga-ewetara gị njirisi zuru ezu na nke Anyị na-adaba iPhone 6s Plus na Samsung Galaxy S6 ihu +. Kedu n'ime titan abụọ a ga-ebili dị ka ihe kachasị mma n'ahịa?
Aesthetically, ma ọnụ nwere àgwà kwucharad nwere ezigbo mma mma. N'ihe banyere ọhụrụ iPhone 6s Plus anyị nwere ike igosi na Apple emewo ka aluminom rụọ ọrụ ya iji mee ka okwu bendgate na-ese okwu ghara ime ọzọ.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị nke iPhone 6s Plus na-abịa na ihuenyo ya, nke echekwara site na a kristal na teknụzụ Ion-X, na-enye ezigbo nchekwa megide ọkọ na mmetụta ndị nwere ike. Ka anyị gaba na Galaxy S6 onu +.
Ma ọ bụ na phablet ọhụrụ ahụ nwere ihu abụọ na-esite na Samsung pụta ìhè maka obere nhazi ya karịa nke onye na-asọmpi ya, na mgbakwunye na ọ dị ntakịrị. Ọ dị mma, ọdịiche dị na nha adịghị oke, mana ihu + pere mpe. Na nke anyị ga-agbakwunye na Galaxy S6 ihu + dị gram 153, ebe iPhone 6s Plus na-anọ na gram 192.
A na-echekwa akụkụ niile nke Samsung Galaxy S6 ihu + na oyi akwa Gorilla Glass 4, ya mere anyị nwere ike ịkwado na ọ ga-anagide bumps ma daa adaba na ọgba aghara ọ bụla. Kedu mkpebi anyị? N'akụkụ a, Samsung Galaxy S6 ihu + na-enweta mmeri.
Uzo ozo nke ekwentị abuo kariri ma obu pere. The iPhone 6s Plus nwere Retina HD ngosi na 3D Aka nke na-enye ohere na-enweghị njedebe, dịka teknụzụ a abanyela na iOS 9. inch 5.5 ya ruru mkpebi 1080p, karịa ezuru onye ọrụ ọ bụla.
N'ihe banyere Galaxy S6 ihu +, ya 5.7-inch panel na-enye mkpebi 2K na ezigbo arụmọrụ. Kedu nke ka mma n'ime enyo abụọ ahụ? Ọfọn, na nkebi nke a nke anyị tụnyere n'etiti Samsung Galaxy S6 ihu + na iPhone 6s Plus anyị ga-enye a oru tie: ka onye ọrụ na-ekpebi nke ihuenyo ha na-amasị ndị kasị ebe ọ bụ na ma ọnụ na-enye a-akpali nnọọ mmasị nhọrọ na nke a.
Na nke a, ekwentị abụọ na-agbaso usoro dị iche iche: mgbe iPhone 6s Plus na-eji ihe nhazi A9 na 2 GB nke ebe nchekwa RAM, nal Samsung Galaxy S6 ihu + integrates a Soc Exyos 7420 tinyere 4 GB nke Ram.
Tupu Touchwiz omenala oyi akwa mere Galaxy na-ata ahụhụ site na njigide iwe, mana iji ụdị Samsung kachasị ọhụrụ a edozila nsogbu ahụ. Gịnị bụ nkwubi okwu anyị? Ekwentị abụọ ga-arụ ọrụ dịka silk. N'ezie, ụdị dị mfe nke iPhone 6s Plus nwere 16 GB nke nchekwa dị n'ime, ebe ụdị Samsung Galaxy S6 ihu dị egwu + na-echekwa ncheta nke onye asọmpi ya na-eru 32 GB nke ebe nchekwa.
Nke a bụ otu n’ime akụkụ kachasị mkpa na ekwentị, ma iPhone 6s Plus na Samsung Galaxy S6 ihu + na-enye oke ngwọta dị egwu. Igwefoto iPhone 6s Plus mebere lens 12pipipixel ike nke na ndekọ vidiyo na 4K àgwà.
La Galaxy S6 ihu + igwefoto Ọ dịghị anya n'azụ ekele ya 16 megapixels na otu ohere ịdekọ na 4K. N'akụkụ a, anyị ga-echere iji hụ nnwale dị adị iji nwee ike ịme ntule zuru oke ebe ọ bụ na, dịka ị maara nke ọma, na ekwentị nwere ọtụtụ megapixels apụtaghị na igwefoto ya ka mma.
N'ezie, mgbe m nwesịrị Galaxy S6 Edge maka otu ọnwa, enwere m ike ijide gị na Apple ga-enwerịrị ezigbo igwefoto ya ka ọ nwee ike merie oghere dị ike nke Samsung na-eji.
N'ikpeazụ anyị nwere ngalaba batrị: iPhone 6s Plus nwere batrị 2.915 mAh, ebe Samsung Galaxy S6 ihu + ruru ikike nke 3.000 mAh. Obere ihe di iche, na mgbakwunye na eziokwu ahụ ruo mgbe enwere ike ịme arụmọrụ arụmọrụ na iPhone 6s Plus anyị enweghị ike ịbịaru nghazi doro anya.
4.5 akara kpakpando 4 akara kpakpando
Anyị nwalere Samsung Galaxy S6 ihu +, Samsung ọhụrụ ekwentị nwere okpukpu abụọ a gbagọrọ agbagọ na ihuenyo 5.7 nke anụ ọhịa na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị mma na ahịa.
Apple gosipụtara ụdị iPhone 6s Plus ọhụrụ ya. Anyị na-enyocha ya n'ụzọ zuru ezu ma lelee ma ọ bụrụ na ị nwere osisi kachasị ere.
Nkwubi okwu anyi doro anya: ekwentị abuo na-enye ihe yiri ya. Onwe m, m ga - ahọrọ Samsung Galaxy S6 ihu + maka ọnụ ala ya, sistemụ arụmọrụ yana ihe mbadamba okpukpu abụọ ya gbagoro agbagọ. Ma gị, Kedu ekwentị nke ị chọrọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S6 ihu + na iPhone 6s Plus, onye ga-ebili n’ocheeze nke ahịa phablet?
n'ezie lg g4
ọ dịghị onye ọzọ dị ka sony z5 premium
Samsung Galaxy S6 ihu + kacha mma ...
Super Mario Bros maka gam akporo na-enweghị mkpa maka emulator